musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Austria Kuputsa Nhau » Vienna inosarudza kuchengeta meya anodiwa naAdolf Hitler
Austria Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • dzidzo • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Vienna inosarudza kuchengeta meya anodiwa naAdolf Hitler.
Yakanzi 'mambo weVienna', Lueger akakurudzira vanhu kurwisa vaJudha, achivarondedzera se "vanhu vakaponda Mwari" uye "vatorwa vevagari vemo."
Matongerwo enyika yaMayor Karl Lueger anonzi akakurudzira Adolf Hitler.
Hurumende yeVienna yakati chirongwa chemakore maviri chichatangwa kugadzirisa zvakare chifananidzo chakareba cheaimbova Meya Karl Lueger.
Sarudzo yekuchengeta chifananidzo chaLueger yakatevera nhaurirano nevane chekuita neguta vakasiyana-siyana nezve magadzirirwo enhaka yameya ine gakava.
Hurumende yeguta guru reAustria reVienna yaramba zvikumbiro zvekubvisa chivezwa cheaimbova Meya weVienna Karl Lueger, ane maonero echivanhu anonzi akakurudzira mudzvanyiriri weNazi mune ramangwana. Adolf Hitler.
Panzvimbo pokubvisa chiyeuchidzo, Vienna's meya anotonga, Michael Ludwig, akati ari kufarira nzira ye'artistic contextualization.'
Hurumende yeVienna yakazivisa kuti chirongwa chemakore maviri chaizotangwa kugadzirisa zvakare chifananidzo cheaimbova Meya Karl Lueger. Kuti chifananidzo chichaita sei mushure me "contextualization" chinoramba chichionekwa, sekubvunzana uye kutendwa kuchiri kuzotangwa.
Sarudzo yekuchengeta chifananidzo chaLueger, uyo aidzora guta guru reAustria kubva muna 1897 kusvika 1910, yakatevera nhaurirano nevatori vechikamu vakasiyana-siyana veguta pamusoro pekuita nenhaka ine gakava yameya.
zvemazuvano Vienna Meya Michael Ludwig anotarisira kuti chirongwa ichi hachizopedzwa kusvika 2023, vachiona kuti pachavambwa tenda yekuzotaridzika kwechifananidzo ichi. Vati chirongwa chinokunda chichapihwa mubairo na "top-class" jury. Hapana bhajeti rakapihwa chirongwa ichi, uye hazvizivikanwe kuti tenda ichavhurwa here kana kuti yevakwikwidzi vakakokwa chete.
Yakanzi 'king of Vienna', Lueger akakurudzira vanhu kurwisa vaJudha, achivarondedzera se "vanhu vakaponda Mwari" uye "vapambi vevagari vemo."
Mutungamiriri weNazi Adolf Hitler, uyo akapedza makore matatu muguta guru reAustria Lueger achiri kutungamira, akatsanangura meya se "anotyisa zvikuru meya weGermany wenguva dzose" muzvinyorwa zvake zvehupenyu 'Mein Kampf'.
Austria yagara ichinetsekana kubata nenhaka yaLueger. Zvisinei nekutumidza imwe yemigwagwa ine mukurumbira - yaimbonzi Karl Lueger Ring - muna 2012, chechi, sikweya, bhiriji, matombo matatu, uye chifananidzo che13ft chichiri mukukudzwa kwake.